🥇 ▷ Samsung ayaa naqshadaynaya naqshadeynta Galaxy A70e oo leh tayo sare leh ✅
Samsung ayaa naqshadaynaya naqshadeynta Galaxy A70e oo leh tayo sare leh
Buugga ‘Samsung’ ma aha mid gunaanad ah, waqtigan xaadirka ah, waxaa la dhihi karaa in astaanta ay bilaabatay in la cusbooneysiisto 2020. Bilihii la soo dhaafay, Samsung waxay soo bandhigtay Galaxy A51 iyo A71, gudaha Galaxy S10 Lite iyo al Note 10 Lite iyo toddobaadkan la soo dhaafay, Samsung Galaxy S20 iyo Galaxy Z Flip. In kasta oo ay tani tahay tiro badan oo bandhigyo ah oo ah waxa yar ee aan haysanno sannadkan, Maanta waxaan aragnaa qaabeynta dhameystiran ee mobilada cusub ee imaan doona buugyarahaan, Samsung Galaxy A70e
Samsung Galaxy A70e waxaa laga shaandheeyay Onleaks ee soosaarka tayada sare leh, laakiin xitaa naftaada la socoshada magaca taleefanka gacanta laftiisa, Kani waa qofka kuu sheegay isha, laakiin tani maahan markii ugu horreeysay oo Samsung ay magac ku yeeasho suuqyada dhexdooda. Si kastaba ha noqotee, maadaama aanan faahfaahin dheeraad ah ka haynin tan, waxaan sii wadi doonnaa inaan ugu gudbinno Samsung. Galaxy A70e
Samsung Galaxy A70e wuxuu noqon doonaa taleefan heerkiisu hooseeyo
Qalabka dhexe ee Samsung, La Galaxy A70 (ama A71, tusaale ahaan), waa mid ka mid ah jihooyinka ugu fiican. Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn midka ugu fiican suuqa, laakiin waxay bixisaa khibrad adeegsade wanaagsan, haa, qiimo ka sarreeya 400 euro. Ok hada la Samsung Galaxy A70e waxaan arki karnaa nooca qiimo jaban kala duwan ee dhexe, kaas oo aannan wali garanayn astaamihiisii, laakiin qaabeynta, waxaan ognahay in kala duwanaanshuhu hooseeyo
Samsung Galaxy A70 wuxuu u taagan yahay isticmaalka wanaagsan ee jirkiisa hore ee shaashadda 6.7 inji, laakiin Samsung Galaxy A70e ayaa la yimid cabbir aad u gaaban, oo leh 6.1 inji ah iyo jirku si fiican uma isticmaalo, beenta. Dhanka sare ee shaashadda waxaan ka helnaa dhibic biyo ah, laakiin mar labaad, ka weyn A70-ta asalka ah. Sidaa darteed, ka dib dhimistaan ​​cabbir ahaan, cabbirrada Galaxy A70e waa sida soo socota: 156.8 x 76.45 x 9.35 mm.
Waxaa jira laba tilmaamood oo ina tusaya inaan horreyno tareenka iskuxiran, sida beddelashada aqristaha shaashadda sawirka si uu u yeesho mid jirkiisa gadaal ka jiro, marka la yaab maahan inay leedahay guddi IPS halkii OLED ah. Ugu dambeyntii, qeybta hoose ee dekada USB Type-C isweydaarsiga microUSB duug ah, dhaqdhaqaaq aan micno lahayn taasina waxay kasoo horjeeddaa waxa aan ka filayno qaanuunka sharciga ah ee sannadkan.
Samsung Galaxy A70e ayaa la imaan doona Saddex kamaradood oo taagan oo ay wehelinayaan toosh laambad leh Iyo si kale haddii loo dhigo, waxaan ku faraxsanahay in Samsung ay iloobeen mowjadda kumbuyuutarka wareega ee taleefankan gacanta, inkasta oo ay sidoo kale ahayd wado noo sheegaysa, in ay wali qayb ka ahayd taleefanka gacanta sanadkii hore, adoo wata isla isla qadka. ee naqshadeynta.